ဘယ်ညာ ဘယ်ညာ | Facebook - Download Facebook Videos
ဘယ်ညာ ဘယ်ညာ | Facebook
Red Radiance Digital Cinema - Mya Han Thar Thanlyin - မွဟံသာ သနျလငျြမွို့ 13.2K Views
Download MP4 HD 13.97MB Download MP4 SD 3.33MB
<iframe width="600" height="350" src="https://e.bajarfb.com/356151555015390" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
မင်္ဂလာပါ. . .
ကျွန်တော်တို့ Red Radiance Digital Cinema ( မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ ၊ သန်လျင်မြို့) တွင်
Posted 1 year ago in .
⭕️လူဘ၀မှကုသိုလ်ထူးပြီးမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ မထင်မှတ်ဘဲ အန္တရာယ်တစ်ခုကြောင့်........ အခြားဘုံဘ၀သို့ရောက်ရှိပြီး ၀ိညာဉ်ဘ၀က သူရောင်မယ်လေးနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ပါကုသိုလ်ကံ အရမ်းကောင်းလွန်းတော့ ⭕️လူဘ၀မှာ တခါ ⭕️၀ိညာဉ်ဘ၀မှာတခါ မင်္ဂလာထပ်ဆောင်ရတဲ့အဖြစ်ကို 🎥#နှစ်မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မှာ ဘယ်လိုတွေတောင် ရိုက်ကူးထားလည်းဆိုတာကို 😂🤣တ၀ါးဝါး 😂တဟားဟားနဲ့ကြည့်ရှုရမ...
Red Radiance Digital Cinema - Mya Han Thar Thanlyin - မွဟံသာ သနျလငျြမွို့ 4.9K views ·
🎥မင်္ဂလာဦးည🎥 ၂၉.၃.၂၀၁၉ မှာ အလှည့်ကျတဲ့ မင်္ဂလာဦးည ကတော့🍎🍎 ပုရိသကိုကိုတို့အကြိုက်နော်😍😍😍😍 ကတ္ထိယ မမ တို့လည်းအလန်းတွေနဲ့ အကန်တွေကြည့်ရမှာနော်❤️❤️❤️ ရုံတင်မယ့်ရက်ကသင်္ကြန်မလာခင်လေးဆိုတော့ ငပလီကမ်းခြေရဲ့ အငွေ့အသက်လေးနဲ့သင်္ကြန်အရသာလေးခံစားကာပျာ်ပျော်ပါးပါး လာရောက် ဟားကြတော့နော်👄👄 Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ )မှာ ၂...
Red Radiance Digital Cinema - Mya Han Thar Thanlyin - မွဟံသာ သနျလငျြမွို့ 3.6K views ·
🎬ဒယ်ဒီဖားကင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး 🎬 💢တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆေးထိုးကြမ်းတဲ့နေရာမှာ....💢 👨‍🔬👨‍🔬ဆရာဝန်တောင်အရှုံးပေးရတယ်ဟေ့.... 👦👨တက်လူနဲ့ရွှေထူးကဘဲဆေးထိုးကြမ်းမလား....❓❓ 🐸ဒယ်ဒီဖားကင်ကဘဲဆေးထိုးကြမ်းမလားဆိုတာ...❓❓ ❤️ချစ်ပရိသတ်တွေ...... 😂တဝါးဝါးတဟားဟားနဲ့ရီမောပျော်ရွှင်သွားစေမယ့် #🎥ဒယ်ဒီဖားကင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး🎥 💥💥မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့မှစတင်၍Red Radiance Digital ...
Red Radiance Digital Cinema - Mya Han Thar Thanlyin - မွဟံသာ သနျလငျြမွို့ 5.5K views ·
မေတ္တာတရား နဲ့ အမှန်တရားကြားက မိန်းမသားနှစ်ဦးအကြောင်း လှပ်ခနဲ သင် တွေ့ရချိန်မှာ လွင့်မျောခံစားရမယ့် " လှပ်၍လွင့်သော.. " မတ်လ ၂၂​ ရက်နေ့Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ )မှာ လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
Red Radiance Digital Cinema - Mya Han Thar Thanlyin - မွဟံသာ သနျလငျြမွို့ 1.7K views ·
🎞လှတောသားနဲ့ယောက္ခမလောင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး🎞 💥လှတောသားလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့... ပြေးမြင်မိတာကတော့ စကားပြောတဲ့နေရာမှာ..... နှစ်ယောက်မရှိအောင် အပြောကြွယ်တဲ့သူဆိုတာပါပဲ.... ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လှတောသား/သူတွေရဲ့.... ဓလေ့ထုံးစံကို ကျေးလက်သဘာဝကျကျ ဟာသမြောက်အောင် ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့.....💥 #လှတောသားနဲ့ယောက္ခမလောင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး 💥💥မတ်လ (၈)ရက်နေတွင် Red R...
Red Radiance Digital Cinema - Mya Han Thar Thanlyin - မွဟံသာ သနျလငျြမွို့ 4K views ·
💢 ဗျစ်ရည်ဆိုင်စောင့်တဲ့ဘီလူး 💢 ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး 👹👹👹 ဒီနယ်တကြောမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဘီလူးကြီး တာနောဆိုတာ သိပြီးပြီလား… 💢💢💢 နာမည်ကြီးဆို ရင်ဘတ်က ဘီလူးရုပ်ကိုက👹 သချိင်္ုင်းမှာ ပွဲပေးပြီး ထိုးထားတာ… လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုက ဗျစ်ရည်ဆိုင်မှာ စကျူရတီလုပ်တာ… 😎 📣 ဘီလူးက ဟိတ်ဆိုတာနဲ့ ဆိုင်ရှင်ကအစ တိတ်ပြီးသား…🤐 မတိတ်ရင် ပုလင်းတွေ ကုန်မှာစိုးလို့… 🤣🤣🤣 တစ်လောကလုံးမှ...
Red Radiance Digital Cinema - Mya Han Thar Thanlyin - မွဟံသာ သနျလငျြမွို့ 2.1K views ·
Happy Death Day 2U ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို (1.3.2019) ရက်နေမှစ၍ Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ )မှာ လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
Red Radiance Digital Cinema - Mya Han Thar Thanlyin - မွဟံသာ သနျလငျြမွို့ 2.5K views ·
Red Radiance Digital Cinema (မြဟံသာ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံ-သန်လျင်မြို့ )မှာ လာရောက်ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..... ------------------------------------------------------------- ကြိုတင်လက်မှတ်များကို 09-262111100 09-262111103 သို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်... အားပေးမှုကို Red Radiance Co.,Ltd (မြဟံသာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ) မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
Red Radiance Digital Cinema - Mya Han Thar Thanlyin - မွဟံသာ သနျလငျြမွို့ 1.8K views ·
💥မင်းနဲ့စ တွေ့တဲ့ အချိန်မှစ မင်းအကြောင့်စဉ်းစားရင် ...... ‼️ငါ့ရင်တွေခုန်းလွန်းလို့ မနည်းဖိထားရတယ်....... ❤️အဒါအချစ်လား...??? တကယ်တော့.....လူမိုက်ကြီးမှာ လဲ နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားရှိပါတယ်.... ❤️ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ..... 👤လူသားတိုင်အတွက်.. အချစ်က နူးညံစေတာလားဆိုတာ.... 🎥Hero ဟီးရိုး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး🎥 ကို (၂၂.၂.၂၀၁၉) ရက်နေမှစ၍ Red Radiance Digital Cine...
Red Radiance Digital Cinema - Mya Han Thar Thanlyin - မွဟံသာ သနျလငျြမွို့ 3.5K views ·